Madasha Muuqaalka: Guddoomiyayaashii SNM:
You are here: Home Home Madasha Muuqaalka: Guddoomiyayaashii SNM:
Sabti kasta waxa aad ka daalacan kartaa Mareegta dharaaro.com sawirro cusub oo ku sahabsan sooyaalka taariikheed ee dadka Soomaaliyeed,
gaar ahaan Somaliland iyo SNMba. Sawirradaas oo dhinacyo badan oo nolosha taabanaya, waxa aad ka daalacan kartaa Qaybta sawirrada ee Mareegta dharaaro.com oo weliba intii la soo dhigaaba keyd kuugu oollayso. Fadlan ku soo darso wixii aad doonayso in lagu keydiyo oo sawirka isirkiisa aad la hadhi doonto. Fadlan soo raaci waxoogaa macluumaad ah. Toddobaadkan waxaad ka daalacataa Guddoomiyayaashii soo maray SNM iyo muddadii ay xilka hayeen. Daawasho fiican.